Igwe akụrụngwa nke hydraulic, onye na-emeputa ihe & na-eweta - TSINFA
Ị nọ ebe a: Ulo1 / igwe akụrụngwa haịdrọlik
Tsinfa bụ ọkachamara soplaya & emeputa nke haịdrọlik pịa igwe na China. Igwe akụrụngwa nke hydraulic bụ nke kwesịrị ekwesị maka ịgbado, ịbịaru, ịkpụgharị, ịpịpụta ihe na usoro ndị ọzọ nke mpaghara mpaghara. Ọ nwere ike na-onwem na blanking echekwa, punching ngwaọrụ, na-akpụ akpụ table na ngwaọrụ ndị ọzọ maka punching oghere na blanking nhazi dị ka ndị ahịa chọrọ. A pụkwara iji ya maka usoro ịpị nke akụkụ osisi, mgbazi, ịkọ na ịpị usoro profaịlụ, na ikwe, mechie, zọọ, nesting, ịgbatị akụkụ mpempe akwụkwọ ígwè, ịpị na ịkpụ ngwaahịa plastik na ntụ ntụ. Ọ bụ akụrụngwa izizi maka ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri nrụgide, ụlọ ọrụ kemịkal na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ na-akpọ eluigwe na ala haịdrọlik pịa n'ihi na nke obosara ngwa.
Enwere ike ịhazi ya dịka ihe ị chọrọ
Chọrọ ọnụego?Nye anyị oku na + 86-15318444939, ma gwa otu onye ọkachamara ọkachamara anyị okwu.I nwekwara ike dejupụta anyị: ụdị ịkpọtụrụ
Hydraulic pịa igwe maka ọrịre
Nkọwapụta & onyonyo
4 post haịdrọlik pịa, maka SMC ịpị ịkpụzi, servo moto, PLC akara, mata 2m ọrịa strok 1.5m. Obere mkpọtụ. Gba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ 4 - gbadata ọsọ ọsọ - pịa - nwayọ nwayọ - gbaghachi azụ. Akwa nloghachi ike.
400 ton Hydraulic Press Machine N'ihi Smc / Bmc
4 post hydraulic pịa ya na cylinder abụọ, nguzo ike, akụkụ abụọ nwere cylinder nchekwa, belata mkpọtụ, nke eji egbutu, ịpị. Ihe nkedo nchebe na-echebe nchekwa ahụ. Ọ bụrụ na etinyere aka onye na-arụ ọrụ na mpaghara ọrụ site na ndudue n'oge mmechi ahụ, pịa ga-akwụsị na mberede.
150 ton Dual cylinder haịdrọlik pịa igwe
300 ton ntụ ntụ ịpị ịkpụzi, akpaka nri, akpaka ịrụzu. Njikwa PLC. Akụrụngwa dị mma maka imepụta ehi na ebe atụrụ atụrụ.
2500 ton haịdrọlik pịa, 8 ogidi, 6 mmanụ cylinders, mmepụta ụzọ efere, n'ihi na mpempe akwụkwọ metal embossing.
20 - 630 Ton C etiti hydraulic pịa, nke a makwaara dị ka ụdị hydraulic dị iche iche, isi mgbali n'isi, isi nrụgide isi, isi nrụgide nwere ndu ndu kọlụm. Mepee n'akụkụ atọ, nnukwu oghere ọrụ, kwesịrị ekwesị maka ịgbatị, na-ebu nrụgide nrụgide. Enwere ike ijikọ ya na ngwaọrụ akpaka, nhazi nhazi.
C Fraị Hydraulic PressYL41-20 Ton 630 Ton
200 - 1000 Ton etiti haịdrọlik pịa, mechiri emechi ụdị. Dị iche na ntuziaka nke akụrụngwa hydraulic nke anọ, ọ na-eduzi ya ụzọ asatọ nwere ihu ọma, nkenke dị elu, ikike mgbochi ịgbagha, ọsọ ọsọ ọsọ, kwesịrị ekwesị maka nhazi ọsọ ọsọ, ịpị, ịcha, nwere ike ịgbasa mmemme akpaaka , nhazi nhazi.
200 ton H etiti Hydraulic Press Machine
400 - 1500 Ton kpo oku efere Hydraulic pịa, okpokoro na okpokoro na-ekpo ọkụ ọkụ ọzọ, nwere ike ịbụ nke a na-ekpo ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ mmanụ ọkụ, uzuoku iji nweta oke okpomọkụ nke ihe eji arụ ọrụ. Okpomọkụ na-achịkwa site na ngosipụta, arụmọrụ ọkụ dị elu. The ibughari worktable nwere ike họrọ maka mfe disassembly nke workpiece na ebu
400 Ton kpụ ọkụ n'ọnụ platen presses
150 - 2000 Ton hydraulic pịa, cylinder mmanụ nwere ike ịmegharị. Maka workpiece adịghị adaba ịkwaga, ị nwere ike ịhọrọ igwe hydraulic a. The cylinder na-anya site n'akụkụ push cylinder, na-akpụ akpụ site n'otu akụkụ gaa n'akụkụ, mfe ma adaba.
200 ton ịgbatị Press Machine
100 Ton gantry ụdị hydraulic ekwe igwe, bụ nke a na-ejikarị maka ịgbado mpempe akwụkwọ ígwè, site na njikwa eletrik, ọnụahịa dị ọnụ, nke kwesịrị ekwesị maka ịhazi ogologo nke workpiece n'okpuru otu mita, tebụl nwere ike ịkwaga na ala, nwere ike ịwụnye ebu.
100 ton Hydraulic ekwe igwe
150 Ton mpempe akwụkwọ metal ịbịaru haịdrọlik pịa, obere tonnage a na-eji na-emepụta igwe anaghị agba nchara akụrụngwa, dị ka ọkwá, efere, wdg Nnukwu tonnage, dị ka 2000 Ton, nwere ike na-emepụta arịa isi. Na elu na cylinders abụọ, arụ ọrụ abụọ.
Deep ịbịaru pịa igwe 150 Ton
1000 Ton multi-oyi akwa haịdrọlik pịa, multi-ojii, nwere ike-enwe obi n'otu oge. High mmepụta arụmọrụ, mmanụ cylinder dị na ala nke fuselage, na ala elu elu, mfe ebe workpiece.
Multilayer haịdrọlik pịa 1000 Ton
400 Ton kwụ haịdrọlik pịa, kehoraizin ọnọdụ nke mmanụ cylinder, ka pịa workpiece ekpe na nri, uwe maka ogologo workpiece nhazi na ịpị, dị ka square tube extrusion, wheel aro ịpị, wdg Ọdịdị nwere ike ịbụ atọ ma ọ bụ anọ na ogidi.
Kwụ Hydraulic Wheel Press Machine400 Ton
20 Ton ịgbatị haịdrọlik pịa na ogologo na-arụ ọrụ table n'ịnyịnya na V ekara ígwè ịgbatị workpiece. Onyinye ụkwụ mgba ọkụ, wireless ime akara, mfe iji rụọ ọrụ.
500 Ton kwụ haịdrọlik pịa igwe
500Ton vetikal haịdrọlik pịa, abụọ mmanụ cylinder, ike itule, na worktable nwere ike na-akpali site n'akụkụ cylinder.
600 ton Vetikal Hydraulic pịa mobile worktable
800 Ton obere ejection haịdrọlik pịa abụọ ibé na anọ na ogidi, anụ Ọdịdị, mfe nri, ahaziri ahụ na-agba, mgbali mmetụta na displacement ihe mmetụta iji nweta elu nkenke akara.
800 ton Hydraulic pịa igwe obere sịlịnda
ANY CAN nwere ike imepụta dị ka mkpa gị si dị, kpọtụrụ anyị maka ngwọta na ajụjụ.
Hydraulic pịa igwe ọrụ vidiyo 100-3000 ton
Gịnị bụ haịdrọlik pịa igwe?
Hydraulic press bụ ụdị igwe na-akpụ igwe nke na-eji mmiri mmiri arụ ọrụ ma mee ya dị ka ụkpụrụ Pascal si nyefee ike ma ghọta usoro dị iche iche.
Ọ bụghị nanị na a na-eji hydraulic pịa maka ịkpụzi, kamakwa maka ịgbatị, ịpị, mbukota, ịpị mgbochi na ịpị efere. Ọ na ọtụtụ-eji ịpị nhazi na-akpụ nke dị iche iche plastic ihe, dị ka extrusion, ekwe, ịbịaru nke igwe anaghị agba nchara efere na oyi na-atụ ịpị akpụ nke metal akụkụ. A nwekwara ike iji ya na ịpị ngwaahịa ntụ, egweri wiil, bakelite, resin thermosetting ngwaahịa, wdg.
Principlekpụrụ bụ isi bụ na mgbapụta mmanụ na-ebunye mmanụ hydraulic na ngwugwu ngwugwu a na-ejikọta ya, ma na-ekesa mmanụ haịdrọlik n'ime oghere elu ma ọ bụ oghere ala nke cylinder mmanụ site na valvụ ọ bụla na-agafe na valvụ na-ejupụta, iji mee mmanụ mmanụ na-agagharị n'okpuru ihe nke mmanụ nrụgide dị elu. Iji mezuo ihe achọrọ nke ọsọ na-agagharị nke onye na-eme ihe nkiri, a na-ahọrọ otu ma ọ bụ karịa nfuli mmanụ. Gear pump for low pressure (mmanụ mgbali na-erughị 2.5MP); mgbapụta vane maka nrụgide ọkara (nrụgide mmanụ na-erughị 6.3mp); plunger mgbapụta maka nnukwu nsogbu (mmanụ mgbali erughị 32.0mp).
Igwe hydraulic nwere isi engine na usoro ike. Akụkụ bụ isi nke hydraulic press gụnyere isi ahụ, isi ihe ntanetị, cylinder na-atụpụ ya na ngwaọrụ ndochi. Usoro ike nwere mmanụ mmanụ, mgbapụta nrụgide dị elu, sistemụ njikwa nrụgide dị ala, moto, valvụ nrụgide dị iche iche na valvụ ntụzịaka. N'okpuru njikwa nke ngwaọrụ eletriki, usoro ike na-amata ntụgharị ike, iwu na nnyefe site na mgbapụta, cylinder mmanụ na valvụ hydraulic dị iche iche, na igwe hydraulic mezue mgbasa nke usoro usoro dị iche iche.
A na-egosiputa nkọwapụta nke hydraulic pịa site na ọnụ ọgụgụ ọrụ (KN) ma ọ bụ nha aha (T).
Njirimara kasịnụ nke igwe hydraulic bụ na ọ na-eme ka ọ dị larịị, akụ na ụba ma nwee ike iji ya mee ihe.
Ofdị igwe akụrụngwa hydraulic?
Dị ka ụdị nke mmiri mmiri mgbasa nsogbu, nwere ike kere n'ime mmanụ haịdrọlik pịa mmiri haịdrọlik pịa
Dika nduzi nke ike, enwere ike kee ya na uzo na uzo
Dabere na ọnọdụ ọrụ, enwere ike kewaa n'ime ntuziaka na eletriki
Dịka ọnọdụ njikwa, enwere ike kee ya na CNC na izugbe
Dabere na ihe owuwu ahụ, enwere ike kewaa ya na ụdị kọlụm anọ, ụdị kọlụm otu (typedị C), ụdị kọlụm abụọ, ụdị kwụ ọtọ, etiti kwụ ọtọ (gantry H frame), igwe hydraulic zuru ụwa ọnụ, wdg.
Dabere na ngwa, nwere ike kere n'ime metal akpụ, ekwe, ndinyanade mbịne, punching, ntụ ntụ (metal, na-abụghị metal) akpụ, ịpị, extrusion, wdg
Dị ka nhazi technology, nwere ike kere n'ime ntụ akpụ haịdrọlik pịa, ụgbọala arọ doo haịdrọlik pịa, na-abụghị dara pụrụ iche haịdrọlik pịa, n'ibu idozi haịdrọlik pịa, carbon ngwaahịa haịdrọlik pịa, plastic ngwaahịa haịdrọlik pịa, seramiiki ngwaahịa haịdrọlik pịa, wdg
Dabere na tonnage, nwere ike kee n'ime 1 ton, 5 tọn, 10 tọn, 50 tọn, 63 tọn, 100 tọn, 200 tọn, tọn 315, 500 tọn, 1000 tọn, 3000 tọn, wdg ọ bụla nsogbu tonnage nwere ike ịtọ dika ihe onye ahia choro.
Ngwa nke igwe hydraulic pịa
Ugbo ala, ugbo elu na ulo oru ngwa oru
A na-ejikarị ya eme ihe maka ụdị ígwè ọ bụla, gụnyere stampụ, ịbịaru, na ịmepụta usoro nke akụkụ mkpuchi ọla, akụkụ mpempe akwụkwọ, na ngwaọrụ ndị ọzọ. Na mpaghara a, ọrụ nke igwe hydraulic enweghị ike ịgbanwe agbanwe, ọ bụkwa igwe dị mkpa nke ụdị ụlọ ọrụ a.
Nhazi nke obere na ọkara-sized n'ibu akụkụ
A na-ejikarị ya arụ ọrụ maka obere na ọkara dị nchara akụkụ dị iche iche na ụlọ ọrụ dị iche iche metụtara ngwaọrụ igwe. Gụnyere extrusion akpụ, anwụ na ịpị akpụ, oyi na-ekpo ọkụ anwụ ibe ya bụrụ na zọ nakwa dị ka free ibe ya bụrụ nke metal profaịlụ.
Uzuzu ngwaahịa ụlọ ọrụ
Lọ ọrụ ahụ kwesịrị ịnweta nnukwu nrụgide na obere oghere iji mee ka ngwaahịa ntụ ntụ rụọ ọrụ, ya mere uru nke hydraulic press bụ ihe doro anya, na nkwụsi ike ya na nrụgide ya na-eme ka ngwaahịa ntụ ntụ nwee ike. Dịka ọmụmaatụ, ntụ ntụ metallurgy na magnetik.
Pị na ịkpụ nke ihe na-abụghị nke ọla
Pressingpị nke ihe ndị na-abụghị nke ọla bụ nke usoro nke ịmepụta ngwaahịa ụfọdụ. Ọmụmaatụ, SMC ịkpụzi, na-ekpo ọkụ na ịpị ịkpụzi nke ụgbọala n'ime akụkụ na nhazi nke roba ngwaahịa, wdg
Ngwá ọrụ na-ekpo ọkụ ọkụ nke ngwaahịa osisi
Ugbo a na-egosipụta njirimara nke hydraulic press, nke nwere ike ọ bụghị naanị ịhazi ngwaahịa igwe siri ike kamakwa mezue mmepụta nke ngwaahịa na-agbanwe. Dịka ọmụmaatụ, teknụzụ na-ekpo ọkụ nke profaịlụ na nhazi nke efere eriri osisi, wdg.
Ngwa nke hydraulic pịa na mpaghara ndị ọzọ, usoro ndị doro anya dịka akara akara plastik, ntinye kwesịrị ekwesị, mgbazi, na stampụ, wdg.
Olee otú anyị na-emepụta haịdrọlik pịa igwe
Production usoro （Ogo njikwa）
Dika otutu ihe eji emeputa ihe nke ndi ahia zutara, gosiputa ihe nchebe.
2. Kwadebe akụkụ,
Ihe nwere ike ịbụ nchara nchara ma ọ bụ nkedo. Ọ bụrụ na ọ bụ efere ígwè, ọ kwesịrị ka ebipụ ya, kpochapu ya ma gbanye ya.
3 Ngwaọrụ igwe,
Igwe igwemaka okpokoro na ntughari uzo, nhazi T-oghere,radial mkpọpu ala igwemaka mkpọpu ala
4. Lelee ogo igwe nke akụkụ ọ bụla iji hụ na ọ dị mma
Main iche nke haịdrọlik pịa igwe:
Hydraulic ịgbatị Press Machine
Hydraulic Deep ịbịaru Press Machine
Ntụ ntụ Compacting Press Machine
Nnu-aracha ralnweta Blocknweta Ime Machine
C Fraị Hydraulic Press